Ihe ojoo nke oke formaldehyde na ụgbọ ala data Data si National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) na-egosi na ihe mberede okporo ụzọ nke ihe eji eme ụgbọ ala na-eme na-adịkarị. Ọ bụ ihe a pụrụ ichetụ n'echiche na obere ute ụgbọ ala nwekwara ike br ...
N'oge ọgbụgba ọrịa, gbado anya na ụdị ejiji ọhụrụ nke ihe mkpuchi ụgbọ ala Ọrịa COVID-19 na 2020 mere ka obodo ahụ pịa bọtịnụ nkwụsịtụ. Mgbe ndụ ogologo oge na ọtụtụ akụkọ gbasara ịlụ ọgụ na ọrịa ahụ, onye ọ bụla nwere echiche ọhụrụ ...
Companylọ ọrụ anyị ga-ejide 16th Automechanika Shanghai na National Exhibition and Convention Center (Shanghai) site na December 02 ruo 05, 2020 Ana m ekele gị nke ukwuu maka nkwado gị na-aga n'ihu na ụlọ ọrụ anyị, N'oge a, Changzhou Deao Vehicle Technology Co., Ltd. wou ...
A na-akpọ China mgbe niile ụlọ ọrụ ụwa. Site na mmelite nke ike akụ na ụba nke China, nnukwu ikike ahịa emeela ka ahịa ndị China nwee anya maka ụdị mba ụwa. Companieslọ ọrụ mba dị iche iche na ụdị mba dị iche iche emeela ọsọ ọsọ ...
Ugbua ihe eji eme TPE ka eji ya rụọ ọrụ na ndụ anyị kwa ụbọchị, enwere ike ichọpụtakwa na ngwaahịa TPE ji nke nta nke nta bụrụ ihe dị mkpa na ndụ anyị, yabụ kedu ihe akụrụngwa tpe? Kedu ka esi arụ ọrụ TPE? Site na nke a ịghọta: ...